Day: Mee 4, 2020
A na-achịkọta EURO ijeri 5,5 maka Vrocine Corona!
Otu Global Vaccine Alliance, nke ehibere iji kwado mmepe nke ịgba ọgwụ mgbochi megide oria corona, malitere ọgbakọ nkwado ego ọfụma. Na mgbakwunye na European Union (EU), mba ndị dị ka UK, Norway, Canada, Japan na Saudi Arabia [More ...]
Nkeji Ikpeazu: Ntutu ntutu isi na Salons Mma na May 11
Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan kwupụtara usoro iwu ya mgbe ọgbakọ ndị isi ala gasịrị. Dabere na nkwupụta mgbasa ozi na-ebi ndụ, azụmahịa dị ka ndị na-ere mmanya, ndị na-edozi isi, na ebe a na-achọ mma ga-arụ ọrụ na 11 Mee. Nkowa nke ndi ulo oru ime [More ...]
Nnwere Onwe izizi nke karịrị afọ 65
Dabere na mgbasa ozi dị ndụ nke Onye isi ala ala President Erdogan mgbe a gbasara nzukọ nke ụlọ ọgbakọ ahụ, a ga-eji nwayọọ nwayọọ bulie mmachi mgbochi maka otu a karịa 65. Citizensmụ amaala anyị karịa iri isii na ise pere aka n’ụbọchị ụfọdụ n’izu [More ...]
A na-ewepụ lọ Iwu Na Obodo 7
Dika nkwuputa mgbasa ozi nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan, mgbasa ozi na-aga n'ihu ga-aga n'ihu na ngwụsị izu a. Agbanyeghị, a na-ebuga usoro iwu na steeti 7 ọ ga-ekwe omume ịga mpaghara ndị a. [More ...]
A na-ewepụ otu ngwa abụọ na Istanbul Ankara na Izmir Taxis
Site na ebumnuche nke ijikwa ihe egwu nke ọrịa coronavirus n'ihe metụtara ahụike ọha na usoro nke ọha, na-ahụ maka ịdịpụ iche na-elekọta mmadụ, na-ejigide mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ịchịkwa ọsọ nke mgbasa ya, ndị Minista Mịnịstrị na-ahụ maka ahịa na taxis ji ya. [More ...]
Aro ndị a na-adọpụ iche maka ndị ọrịa Coronavirus
Nnwale gị na Covid 19 gosipụtara na ọ dị mma, mana mgbaàmà gị dị nro ma ọ bụ na ahụ dị gị mma. Yabụ kedu ihe ị kwesịrị ime? Ndị ọkachamara na-ekwu na ndị ọrịa ga-anọ n'ụlọ mgbochi iche n'ụlọ [More ...]
Site na ụgbọ ala ya na - achịkwaghị achịkwa, ITU Rover Team bịara na 36rd n'etiti ìgwè 3 na asọmpi Mahadum Rover Challenge nke Mars Society dị na United States haziri. Na-aga n’ihu n’ọrụ ya na robots nke mbara ala [More ...]
Etinye ego na Eskişehir OBS na-aga n’ihu
Nadir Küpeli, Onye isi oche nke oflọ Ọrụ Eskişehir OSB, kwuru na ha na-aga n’ihu ọrụ ha dịka njikwa iji mee ka mmepụta na itinye ego nke ndị na-emepụta ihe na itinye ego na OIZ na gburugburu ebe dị mma. Onye isi ala Küpeli kwuru, "Maka mmepe na ọganihu. [More ...]
Turkey Exporters Assembly (TIM), dị ka data tọhapụrụ site April ebupụ 45 pasent nke ebupụ nke Eskisehir na aga ọnwa, mgbe ngụkọta na ọnwa anọ ndị mbụ gosiri a 12 percent ojuju. Hazie Eskişehir [More ...]
Ọrụ Asphalt Etabeghị na felọ Iwu Esemokwu na Eskişehir
Obodo Eskişehir, nke na-eme ihe Corona Virus Combat Action Plan kpebisiri ike, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ya mgbe ọ na-egbo mkpa ụmụ amaala n’ụbọchị ngabiga. N'ọnọdụ a, ya na ESTRAM [More ...]
Nhazi ohuru maka Tarsus Çamlıyayla Yolu Intersection na Konak Mpaghara
A na-aga n'ihu na nhazi ọhụụ maka Mersin Metropolitan Municipal na Tarsus ebe nsụhọ okporo ụzọ adịghị mma na ọsọsọ. Ọ na ejikọ mpaghara Tarsus na Çamlıyayla, yana [More ...]
İBB Kọmitii Sayensị: 'Hapụ Normalization Nọrọ Mgbe Oriri ahụ gasịrị'
Ndị otu IBB COVID-19 Science Advisory Board zutere na Sọnde, Mee 3. Na-eso nzuko ahụ, achọrọ maka ngwa ngwụsị akwụkwọ maka erimeri maka Istanbul na-ekpuchi Ramadan na tupu. [More ...]
Mgbasa Ozi Billgba gwọ nke Igwe amalitela! Ya mere, olee otu esi aru oru?
Onye isi ala İBB Ekrem İmamoğlu webatara ndị nọọsụ nwere nsogbu n'ihe ọgbụgba oge "akwụkwọ nkwụchi ụgwọ". Nkọwa ntinye http://www.ibb.gov.tr İmamoğlu kwuru na enwere ike iru ya site na okwu ndị a: [More ...]
Kedu mgbe a ga-emeghe ụzọ ụgbọ oloko Ümraniye Ataşehir Göztepe?
Onye isi oche CHP Niğde Ömer Fethi Gürer wetara ọrụ ndị Ministry of Transport na akụrụngwa rụpụtara n'afọ ndị gara aga, mana emebeghị nke ahụ ogologo oge, na usoro ajụjụ maka nkwalite TBMM. Respondinggbọ njem na-aza atụmatụ Gürer [More ...]
Njegharị na njem nleta na njem nleta na Cumhuriyet Street Nostalgicramram
Na mkparịta ụka anyị na Bursa Hayrettin Eldemir, Onye isi oche nke Board of Protection of Cultural Heritage of Bursa, ọ mepere ibe iche maka Cumhuriyet Street tramita n’etiti atụmatụ a ga-eweta mmetụ na njem na mgbakwunye na nghọta njem njem Bursa ọhụrụ. Söze… “Ejighị tram a ruo ugbu a,” malitere ma mesie ọrụ nlegharị anya ike: [More ...]
Ndụmọdụ iji nyefee okporo ụzọ na njem nlegharị anya nke Bursa jiri 3 Emetụ aka
Eziokwu dị n'ihu bụ na Bursa abụghị n'ezie obodo kachasị amasị maka ezumike ụsọ-anwụ. Agbanyeghị, na afọ 8 nke akụkọ ntolite ma bụrụ isi obodo mbụ nke Ottoman, ọ bụ obodo dị iche na usoro njem dị mma. Njem nlegharị anya ọkụ na njem nlegharị ahụike na-adịbeghị anya [More ...]
'Nkwado nke nnabata-ego mgbazinye azụmaahịa ndụ obere ego' si Halkbank
N'ime oke ọgụ megide nje Corona, nke ghọrọ ọrịa zuru ụwa ọnụ ma a na-ahụ mmetụta ya na mba anyị, Mmepụta, Azụmaahịa, Industrylọ ọrụ [More ...]
Ministri ahia na-ekwupụta ọnụọgụ mbupụ nke Eprel
Dabere na GTS, mbupụ ji mbulata belata 41,38% n'April tụnyere ọnwa nke afọ gara aga wee rute ijeri dollar 8 993. N'ihi ntiwapụ ahụ, karịsịa mba EU, dị mkpa [More ...]
Uzo ikuku bu ihe eji eme ihe iji nwaa nnabata nke ihe ha na ekwo ikuku. Atọ nke ihe omumu ihe banyere ihe ndia bu ihe nlere nke onyunyo omumu, ihe omumu ihe (nnwale onyunyo) na ule nke ugbo elu. [More ...]
Anyị nwere ike ibuga helikọpta ụgbọ mmiri S-400B Seahawk DSH (Submarine Defense War) n'ụgbọ mmiri, dịka ọ dị ka ịzụta onye na-agba F-35B agaghị enwe ike maka TCG ANATOLIAN (L-70) Mwakpo Mwakpo Mwakpo Ahụ n'ọdịnihu dị nso. Deniz na mmalite 2000s [More ...]
Taksim Tunnel Nostalgic Tram Services bidoro
Zynga enwetara egwuregwu Pọtugal Turkish!
Ndị na-emepụta ụlọ Kurka Otomotiv nke Turkey, nje oria corona, dabere na iwu ndị ahịa na-agbaso n'ihi ihe niile a na-eme na osisi Hasanağa Haziri Mpaghara Mpaghara na June 8 ruo 14 izu [More ...]